Guddiga Ilaalinta Anshaxa Doorashada Madaxweynaha Oo Aan Weli Shaqo Bilaabin – Goobjoog News
Xubno ka tirsan guddiga ilaalinta anshaxa iyo asluub-wanaagga ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa Goobjoog News u sheegey in guddiga aanu weli is baran, isla markaana aaney aqoon xilliga ay shaqo bilaabayaan.
Arrinta ayaa imaaneysa iyaddoo kala u bar uu marayo jadwalka loogu talagalay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya.
Guddiga sida uu guddoomiyaha baarlamaanka sheegey waxaa loo dhisey hubinta habsami u socodka, daah furnaanta iyo bedqabka lagu hirgelinayo geedisocodka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya.
Guddigan waxaa sidoo kale la doonayaa iney la xisaabtamaan baarlamaanka iyo guddiga doorashada madaxweynaha, iyaddoo ay shaqadooda sidaa tahay ayaan la ogeyn xilliga ay shaqo bilaabayaan iyo qaabka ay u shaqo bilaabayaan.
Waxaa xusid mudan in anshax ilaalinta aaney ku koobneen maalinta doorashada madaxweynaha ee la doonayo iney guddiga shaqeeyaan ka hor maalintaas si ay u hubiyaan hufnaanta iyo geedisocodka doorashada shakhsiga Soomaaliya hoggaamin doonta 4ta sano ee soo socota.
Jubbaland Oo u Jawaabtay DFS
Xildhibaan Ugu Baaqay Puntland In Ay wax ka Qabato Dadka Koonfureed Ee Lagu Dhibaateynayo Deegaannadeeda
Dwimff jvavfb Cialis store cialis 20
Haymsx chcvcs Viagra or cialis printable cialis coupon
Jnurfk voewat Buy pfizer viagra generic cialis canada
Ifxonl wspiis Fda approved viagra canada pharmacy
viagra pills viagra buy paypal viagra overnight cheap [url=h...
generic cialis cialis 20mg tablets price buy genereiccialis...
viagra without prescription buy viagra onlin where to buy vi...
brand cialis no prescription chewable cialis shop cialis [ur...
canadianmed cialis cialis uk cialis and no prescription [url...